Duula Ifatti Hin Labsamin ABO, WBO fi Qeerroo Irratti-(Haala Yeroo Irratti Ibsa ABO) – Kichuu
Duula Ifatti Hin Labsamin ABO, WBO fi Qeerroo Irratti
(Haala Yeroo Irratti Ibsa ABO)
(Waxabajjii 02,2018) Haala waraanaa fi siyaasaa Impaayera Itoophiyaa yeroo dheeraaf geggeeddaramaa as gahe keessatti mootummaan wayyaanee fi waahila isaa kan tahe, OPDOn, ABO irratti waggoota 27f duula garaagaraa ifa tahee banuun ni yaadatama. Haala qilleensa siyaasaa fi waraanaa Itoophiyaa keessaa as dhihoo ammoo bifa adda addaan duula ifa hin taane ABO irratti oofaa turuun kan hubatu qofatu beeka.
ABO duula roga hedduu diinaan itti qiyyaafatuun baname kanaaf kallattiin deebisaa kennuurraa of qusatuudhaan, falmaa bilisummaa finiinsuun saba Oromoo abbaa biyyaa fi mirgaa taasisuutti fuuleffataa ture; har’as kanumatti jira. Haa tahuu duulotni bifa dhokataa hedduu qabu kan as dhihoo diinnan Oromoo adeemsisan adadumaan dirree babal’ifataa, tooftaa fi maloota jijjiirrataa guyyaa har’aan tana irra geenyetti cehaa jiru.
2. Duula QBO Irrattii: wayta sochiin mooraa QBO irree fi miira tokkummaa Oromoo daran cimsuun yeroo kamiyyuu caalaa ifee mul’ataa jiruu fi warreen akka OPDOllee bu’aa isaa haaluu hin dandeenye kanatti, hogganoota QBO mooraa lammii itichuu fi gabbisuu akkasuma kan diinaa ammoo huqqisuu fi daaqsuu keessatti qooda qaban irratti duulli gaggeeffamaa jiraachuun diinummaa sirna EPRDF/OPDO kan dirree baasee agarsiisu. Wayta ammaa kana QBO addatti ammoo wareegama ulfaatan kan itti kenname qabsoo hidhannoo xiqqeessuu, busheessuun surraa isaanii fokkisuu, itti qoosuu fi salphisuudhaan qondaalota OPDO kanneen akka Lammaa Magarsaa fi hoggana Itophiyaantin qaanii malee waltajjii ummataa adda addaa irratti ololaa fi arrabsoon deemaa akka turee fi jiru Oromoo irraa dhokataa miti.
3. Duula qaamota tikaa qabsaawota qaroo fi hogganaa qabsoo keessatti qooda qaban jedhanii shakkan Adamsuu: duulli adamsuu, hidhaa fi dararaa sabboontotaa fi qabsaawota Oromoo irratti Finfinnee dabalatee guutummaa Oromiyaa keessatti bal’inaan gaggeeffamaa jira.
Duulli adamsuu hammeeffame kun ummata Oromoof waanuma waggoota 27n dabran irratti raawwatamaa ture tahuurraa haaraa tahuu baatus, yeroo afaaniin Yeroo haaromsaa ti jedhan kana keessatti gaggeeffamuun akeeka haaromsichaa kan eeru yoo tahu, garamitti akka adeemu kan ilaallu taha.
4. Qabata Manguddummaa: duulli sirni wayyaanee fi OPDOn fuula biraatin adeemsisaa jiran ammoo jaarsolii biyyaa fi manguddoota qabatuun qabsoo hidhannoo ABOn deemsifamu irratti fuuleffatuun olola WBO diiguu oofuu fi oofsisuu dha. Akka kanaanis karaa Kibba Oromiyaa WBO Zoonii Kibbaa danda’amnaan harka kennachiisuuf, dadhabamnaan ammoo deeggarsa ummataa dhabsiisani duula waraanaan dhabamsiisuuf akka hojjetamaa jiru Ummanni Oromoo naannichaa akkasumas hawaasni keenya biyya ollaa Keeniyaa jiru ragaa dha.
Warreen WBO dhabamsiisuuf shiraa fi duulaa jiran kunneen silaa dantaa fi fedhii saba Oromoof dhaabbatan tahee humnoota tikaa, waraanaa fi liyyuu haylii Somaalee Ummata Oromoo lafarraa duguugaa jiru hidhannoo hiikkachiisu ture. Duulli kun manguddummaan qabatee Oromoota Keeniyaa fi Oromiyaa keessatti bal’inaan erga banamee kunoo ji’a lama qabatee jira.
Murni EPRDF fi OPDOn duula ifa hin taane WBO irratti banuu isaaniif murni amanamtoota sirna TPLF kan humnoota waraanaa, tikaa fi qondaalota OPDO sadarkaa naannoo fi Onootaa of keessaa qabu Kibbaan Yaa’a Bal’ootti akkasuma Dhihaan Qellem Wallaggaatti bobbahuun karoora bal’aa qabatanii as deeman ifaan agarsiisa. Akka karoora duula kanaatti Yaa’a bal’ootti namoonni 42 kan Onoota 13 irraa walitti dhufan ‘Dhimma ABO irratti kora taasisuu’ maqaa jedhuun akeeka EPRDF/OPDO gubbaa irraa laatameef irratti mariitti jiru. Akeekni marii kanaa ifaa fi gabaabaa dha.
Ummata irratti duula siyaasaa gaggeessuun WBO hidhannooo hiikkachiisuun diinatti akka galchan dhiibbaa irratti godhuu, didu duula waraanaan lafa sana keessaa baasuu dha. Akkasuma Dhiha Oromiyaa irraanis murni ‘Koree Qulleessituu Godina Qellem Wallaggaa’ jedhamu kan qondaalota OPDO sadarkaa naannoo Oromiyaarraa namoota Sadi-Sadi fi bulchitoota akkasumas humnoota liyyuu haylii fi kora bittinneessaa of keessaa qabu akeekuma fakkaataaf Onoota hunda seenee jira. Kana malees hogganootaa fi caasaa ABO irratti bifa adda addaan duula banuuf qophiin adda addaa dhoksaan itti jirama.
Miseensonni ABO, WBO fi Qeerroo-qarreen Bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabajchiisuuf, bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaa mirkaneessuuf falmaa wal irraa hin cinne wareegama ulfaataa baasise finiinsuun duula mootummaa Itoophiyaa, jalee fi tumsitoota isaa ofirraa qolataa akka as geenye si jalaa dhokataa miti. Addatti injifannoo qeerroon bilisummaa oromoo argamsiise ummata Oromoo fi Ummatootni Itoophiyaa hundi akka irraa oomishatan ifaa dha. Har’a kanneen kaleessa sii fi ilmaan kee ficcisiisaa fi gidiraaf saaxilaa bahan yeroo itti afaan mi’eeffatanii qabsoo kee QBO ABO – Qeerrootin asiin geechetti duulaa jiran keessa jirra.
Waan taheef injifannoo argame tiksuu fi duula haaraa murni EPRDF/OPDO banaa jiru bifa barbaachisaa tahee fi siif danda’ame hundaan ofirraa ittisaa fi QBO tiksaa fuul-duratti socho’uuf of qopheessuun dirqama tahuu hubachiifna.
Ummanni Oromoo fi ABOn qabsoo waggoota dheeraaf gaggeesseen mirga fi dantaa ummatoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessaaf kabajaa ol’aanaa akka qabu warraaqsa waggaa dheeraa adeemsise keessatti dalagaan agarsiisuu hundatu ragaa baha. Nutis akkasuma ummatoota biyyattii keessaa kanneen hundarraa kabajaa dantaa Oromoo fi tumsa qabsoo egganna.
Ammallee fedhii fi dantaa saba Oromoo humnaan cabsuuf shirootni hedduun deemaa waan jiranii fi dhiigni dhangala’uun itti fufuuf waan deemuuf ummatootni Itoophiyaa kana hubattanii ummata Oromoo fi qabsoo isaa cinaa akka dhaabbattan ABOn waamicha dhiyeessa.
ABOn akkaataa itti jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa furamu kan ilaallatuun ibsa baasuun ni yaadatama. Rakkoo siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa waliigalatti jeequmsa roga hedduu barootaaf ture hundeen furuufis waggoota kana keessatti yeroo adda addaatti tattaaffii taasisaa bahe. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo biyyattii fi ummatoota hudhee fuul-dura akka hin tarkaanfanne sakaale furuu mannaa, dhaaba ummata biyyattii wayyabaa, ABO, irratti xiyyeeffachuun ifaa fi dhoksaan duulee balaa guddaa geessisaa jiraachuun rakkinicha caalaatti wal xaxaa deemsisuu irra darbee faayidaa fidu hin qabu.
Kanuma waliin hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa kabajamuu mirga Ummatoota biyyattiif waliigalattis nagaa fi nageenya godinichaatti gufuu tahe bifa adda addaan gargaaran akka tarkaanfii fudhachuun ummata Oromoo fi Ummatoota naannichaa nagaa, haqa, dimokraasii fi bilisummaaf jecha wareegama qaalii baasaa jiran cinaa dhaabbatan waamicha keenya dhiyeessina. Duulli ifatti hin labsamin jidduu kana ABO, WBO fi Qeerroo Bilisummaa irratti adeemsifamaa jirus kan hin milkoofne tahuu ABOn irra deebi’ee mirkaneessuu fedha.
Waxabajjii 02 bara 2018
Shimallis Abbaabuu: Cubbuxoon Galaadha ** NEW 2018 Oromo Music
Ka’aa Nurraa Darjjee Shuumii – Ethiopian Oromo Music 2018
Desalegn Bekema – Asimba(አሲምባ) – New Ethiopian Oromo Music 2018(Official Video)